Fabio Grosso wazalwa ngo Novemba 28, 1977 ku-dolobha wase-Italy, Rome. Thanda abadlali professional kunazo iqala ekuqaleni kuka ebuntwaneni. Ukunamathela ezintweni lo mdlalo uye savela kusukela Fabio encane ngokushesha, wayazi kahle, nge onjani ezemidlalo ufuna ukuxhumanisa konke ukuphila kwakhe.
Ngo biography of lo mdlali kumangalise kangaka isithakazelo ayenaso wezifundo zezombusazwe. Ngaphezu kwalokho, wafunda isiFulentshi futhi ngokushelelayo ukulukhuluma. Grosso ushadile futhi unendodana owazalwa World Cup 2006 lapho iqembu Italian kazwelonke yashaya khona iFrance ngo lokugcina.
AmaNtaliyane eFrance bahlangana mqhudelwano elibamba eJalimane. Ngenxa umgomo ngokuwina Grosso, iqembu Italian kuya final. Lena umgomo obaluleke kakhulu kukora ingabe Fabio ukalwe FIFA 2006 omunye wabadlali ubhedu sivikele, okuyinto sithinta umgomo. Futhi umdlalo wokugcina we umdlali webhola kukora isijeziso ngokuwina futhi kwenza iqembu lakhe okungcono emhlabeni, umgomo walo ingenye izikhathi 30 2006 FIFA World Cup ukuthi uzobe siyikhohlwe. Wakhe kufanele ubizwe omunye the best njengoba iqembu Lateral Italy naseYurophu iyonke.
Eminyakeni engamashumi amabili nesithupha we footballer Grosso Fabio kudlalwa DEBUT yakhe okufanayo eqenjini lesizwe izwe lokuzalwa kwakhe e-Italiya. Ithimba wadlala ngokumelene akukho mphikisi kangako - Okhahlamba eqenjini lesizwe. Usizo lwabenza imisenenzi Umsebenzi umsubathi waqala ochungechungeni C2, in the football club "Chieti". Kulezo okufanayo, Fabio Grosso kudlalwa njengenhlangano mdlali ehlasela. Uchungechunge imidlalo kwaba ngaphezu yimpumelelo, futhi football kuye kwabonisa imiphumela emihle. Ngakho, ngo-imidlalo 68 wakwazi ukufaka amagoli 17.
Ngo-2001, "Perugia" usayine isivumelwano ne Grosso. ngokushesha Fabio, mdlali zezinga elihle, iqala ngempumelelo imidlalo ochungechungeni A, kodwa umdlali wasemuva sesikhona kakade. Nimble futhi unesiphiwo abasha umsubathi QAPHELA eyaziwa ebholeni imibuthano Serse Kosmi, owayeyisikhulu football player, ngubani seziqalile ukusetshenziswa wakhe njengoba umqeqeshi ngo-1990. Cosmi kwaqala amaqembu elaziwayo elincane, kodwa wathenjiswa umsebenzi nge "Perugia" ngasekupheleni 2000. Kwaphela iminyaka emine ukuthi aqeqeshe iqembu futhi ngalesi sikhathi wathatha lezinyawo Trophies: UEFA Intertoto Cup, FIFA.
Ngemva kweminyaka emithathu ukusayinwa inkontileka ne Fabio Grosso lebhola "Perugia" siqedwa ochungechungeni B, kanye abadlali baqhubeka umsebenzi wabo club eqinile futhi ashukumisayo "Palermo". Ngokulandelayo, ngemva ambalwa yimpumelelo football zonyaka eSicily, uya football club "Inter" euro ababalelwa ezigidini eziyisithupha. Ngokuya zonke wagqoka Grosso, futhi bekholelwa ukuthi footballer professional bese uzoqhubeka ezibonisa okuhle izimfanelo - ubunzima futhi kunquma ukukhethwa, nomsebenzi okuqhubekayo kulokhu kuhlasela nasekubulaleni afanele konke okuphakelayo nokusaphaza izikimu. Kodwa, ngeshwa, Fabio Grosso uye wahluleka ukubonisa kahle ukuthi besethemba for Milan njalo.
Isikhathi esingcono kakhulu
Eminyakeni engamashumi amathathu, ehlobo lika-2007, Fabio iqala ukudlala football club kwedolobha Lyon. Lolu shintsho kwaba isihluthulelo umsebenzi Grosso. E Lyon, uba iqhawe France, futhi wanika National Super Cup.
Ngisho nangemva kokuba ozithandayo football player wakhe bephuma football club "ngonyama", bekangekhe uyekile ukubona imiphumela iqembu futhi wabukela emidlalweni yabo ngangokunokwenzeka. Footballer ngemfudumalo kakhulu isikhathi sakhe eFrance. Ngo izindaba zakhe, uthi emkhathini ethile efudumele nomndeni ngempela. Esidlule ocebile the club njalo wenza umbono ongenakucimeka wokulingwa on kuye. Uyaziqhenya iqiniso lokuthi ngisho emva kweminyaka embalwa umdlali elala amanye amalungu club, futhi ngezinye izikhathi ngisho nabo ubuso nobuso.
Ngo-2009, umdlali webhola lezinyawo lase liya "Juventus". Umsubathi Professional iba iqhawe esasiwafanele: isigwebo, okuholela umdlalo ibhekene ne-Australia, umgomo-semi final nge ithimba German futhi kuyinkomba imitha-11 khahlela ukuthi isinqumo isiphetho eyenziwe umdlalo wokugcina wokuhlasela iqembu French kazwelonke.
Ukubonakala Grosso e-World Cup olufana FOX Sports isiteshi kuhlanganisa phezulu engcono emhlabeni football umlando.
Ukuqedwa ukudlala kwakhe umsebenzi,
Ngo-2012, Fabio Grosso uphuma nepolyubivshiysya football club, okuholela Ukuzula yesikhashana. Ngemva kwalokho, i-professional umdlali, ngeshwa, isikhathi eside ungakwazi ukuthola club efanelekayo ngazo zonke izindlela. On ezahlukahlukene ayizange ivumelane iningi football club, futhi ngokuphelele zonke isimemo ukuthatha wasemuva eqenjini ayiphumelelanga.
Akumangalisi ukuthi ngenxa yalokho, lo msubathi ithatha isinqumo ngokuphelele okuqinile bona bahlanganyele ngokugcwele professional game. Kwaba njalo umsebenzi football Fabio Grosso. Biography, isilinganiso - kuzo zonke kukhona yokutakula professional kanye izimfanelo ayisihluthulelo uhlamvu ukuthi ozakwabo kwanikezelwa.
Ngonyaka owalandela, Fabio Grosso uthola ilayisensi coaching. Ehlobo lika ngonyaka ofanayo, isidlali football uthola isimemo esisemthethweni kusuka abaholi football club "Juventus" lokubamba iqhaza empilweni club njengenhlangano womqeqeshi leqembu abasha. Futhi-July 21, 2013 ngokusemthethweni uqala umsebenzi wakhe Umqeqeshi. Lo mqeqeshi owake wapheka footballer unezinhlelo sina for ukugcwaliseka iphupho lakhe, futhi manje is egxile ngokuphelele umqeqeshi ithimba.
I-potland yase-Kurland - izinganekwane kanye nezinganekwane